Ipulazi elixhasayo lenza ukuba umuntu wanamuhla acabange ngokuthola imishini ekhethekile, ukusetshenziswa kwayo okuyokwenza kube lula ukwenza imisebenzi efana nokulima, ukutshala izitshalo ezihlukahlukene, ukukhuthaza insimu yendawo noma yedolobha, nabanye. Mayelana nalokhu, kufanelekile ukukhokha ngokucophelela ku-tractor mini ithrekhi.
Umshini wekhwalithi enhle
Le nguqulo ehambisanayo yegrekta evamile evamile inikeza ithuba elihle lomsebenzisi walo ukusheshisa ukuqaliswa kwemisebenzi eminingi ehleliwe futhi ngesikhathi esifanayo ukunciphisa izindleko zabasebenzi. I-minitractor kwi-caterpillar course inikwe izimfanelo eziningi ezinhle:
Uhlu olubanzi kakhulu lwezenzo: ukukhululeka, ukulima, ukulima, ukutshala utshani, ukuvuna nokuhlwanyela izitshalo, ukuhlanza izindawo zeqhwa, amaqabunga kanye nama-debris, njll.
Ukwelashwa okukhulayo, okungenzeka kwenzeke ngenxa yokutholakala kwesistimu yesibungu sokuhamba.
Ukusebenza kahle komshini kukwanele, okukuvumela ukuba unqobe ngokushesha izindawo eziyinkimbinkimbi ebusweni obuseduze.
Ukucindezela okuphansi emhlabathini ngenxa yokuthi izibungu zinokuxhumana okukhulu kakhulu nomhlabathi kunamasondo. Kule ndaba, umhlaba awuxhaswanga, futhi lokhu kubaluleke kakhulu ngesikhathi sokulima.
Inombolo encane yezimpawu ezisele emhlabathini ngemuva kokuba umshini ugijime.
Kodwa ngaphandle kwezinzuzo ezibalwe, umcibisholi wesitoreji usenakho nalokhu:
Isivinini esiphansi sokuhamba. Ngokuvamile, imoto ayikwazi ukushayela ngokushesha kunama-10 km / h, okuyinto kwezinye izimo isithiyo esiyingozi ekusebenziseni kwayo.
I trekta egama layo libiza inani elimangalisayo lamafutha.
Yenza umsindo omkhulu phakathi nomsebenzi, okwathi ngesikhathi ukusebenza komshini isikhathi eside kungathinta ukuzwa kanye nomoya womshayeli.
Ayikwazi ukushayela emigwaqeni nasemigwaqweni, njengemoto evamile.
Njenganoma imuphi umshini, i-motor iyona node esemqoka ku-trekta, ekhokhwa kakhulu. Abanye abasebenza ngobuciko bakhetha ukwakha itekisi yezintambo ngamanye, ngakho-ke abantu abanjalo kufanele bazi kahle ukuthi injini lapha kufanele ibe yi-cylinder ezine, ukupholisa amanzi namandla okulingana nabamahhashi angu-40.
Amapulangwe we-Rubber - lena inguqulo yenkampani yokwesekwa yocansi, okwamanje ithola ukuthandwa ngokwengeziwe. Akuzona neze ezansi ngaphansi kwamacimbi amakhulu ensimbi, asetshenziselwa iningi labashayeli bale moto. Ubuningi bamacimbi buhambisana njalo nobukhulu be-trekta.
I-crawler mini-ugandaganda "i-Uralets" ingenye yamayunithi angabizi kakhulu, aphinde avezwe ngomnotho omuhle. Lo mshini uhlinzekwa ngamafomu amathathu. Futhi ngamunye wabo uhlukile ukunganaki izinga lokushiswa kwamafutha kanye namafutha.
Le trekta ikhiqizwa ebhizinisini elisendaweni yaseChelyabinsk, futhi iningi lazo izingxenye zikhiqizwa eRussia, okuvumela ukucabangela ngokugcwele isimo sezulu sendawo kanye nokuletha umsebenzi wezobuchwepheshe ngokuhambisana ngokugcwele. Ngakho-ke, ukuqala injini yomshini ngisho naseqanda akubangeli ubunzima. Yiqiniso, ezinye izakhi ze-trekta zenziwa e-People's Republic of China.
Imikhakha esemqoka yezobuchwepheshe beTrektor-220 i-Uralets:
Ukusetshenziswa okusetjenziswa ngokukodwa kwe-fuel g 250 k / kW ngehora.
Umthamo we-tank fuel u-8 amalitha.
Isivinini sokunyakaza singama-27.35 km / h.
Isizinda somhlabathi singama 300 mm.
Ingqikithi encane yokujika ingu-3900 mm.
Isisindo somshini ngu-960 kg.
Ifomula ye-Wheel - drive ezine-wheel.
Ukuvama kwe-shaft-off-off shaft kungu-540 rpm.
Impendulo ephawulekayo kuphela yogandaganda yukuthi ayinayo igaraji kwezinye izinhlobo zefektri, ngakho-ke ukusebenza kwayo ngesikhathi sokushisa okukhulu kwesikhala noma emazingeni okushisa aphansi kakhulu kunzima kakhulu, futhi ngezinye izikhathi kuvele kungenakwenzeka.
Amathrekhi we-Rubber ngogandaganda onjalo anika izakhiwo eziphakeme kakhulu zokuxhumanisa, okuvumela ukuzisebenzisa ngisho nasezintanjeni ezithambile zenhlabathi.
Namuhla, abantu abaningi bafuna ukuqoqa itrektri encane yezintambo ngenjongo yomnotho. Nakhu kuyadingeka ukusho ukuthi ngokutholakala kolwazi oluthile namakhono okuhlanganisa umshini onjalo kunokwenzeka futhi kunokwanele kakhulu. Noma kunjalo, kubalulekile ukucabangela ukuthi noma iyiphi inhlangano eyenziwe eyakhelweyo kufanele yakhiwe ngokuhambisana ne-algorithm ethuthukile. Akuyona indima encane edlalwa yizingxenye ezisele, okuyinto evamile ekusebenzeni okufanele ilungiswe ezingxenyeni zokuxuba. Okokuqala, kuyinto efiselekayo ukulungisa izenzo zakho ezihleliwe ephepheni, futhi emva kwalokhu kuphela ukuqhubeka nomhlangano.
Dehumidifier KAMAZ: idivayisi, isimiso yokusebenza, ama-aphoyintimenti
Uhlolojikelele KAMAZ 55102
Road Construction Izinsiza kusebenza Edolobheni ebusika
Okusha njengezindawo "KAMAZ". Ogandaganda Model 5490 - Uhlolojikelele kanye kwebalingisi
"Xanax": imfundo manual, ukubuyekezwa kanye analogue
I-Karate yezingane: izinzuzo nokuchaseneka
I ubuchwepheshe obusha kusiza kogulayo kuphela ukuba badle futhi baphuze
Ukwelashwa Water: ikakhulukazi ngempumelelo izindlela, amasu kanye nokubuyekeza
Isisetshenziswa lapho kutadishwa izilimi zakwamanye amazwe "Duolingo": ukubuyekezwa, izici nekghono
Biography Sholokhov. Kafushane mayelana umbhali omkhulu Russian
Reno Megan Coupe - imoto edolobheni compact